Sirta Raadinta Raaxada Nafta | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Sirta Raadinta Raaxada Nafta
April 15, 2012 – Nin taajir ah ayaa Wiilkiisii u diray inuu soobarto Sirta raaxada Nafta/ xasiloonida, wuxuuna u diray Ninka Dadka ugu kasmada iyo xikmada badnaa. Wiilkii wuxuu sii socday 40 Maalmood, wuxuuna soo gaaray Daar aad u Qurux badan, oo kutaala meel aad usaraysa. Waxaana degenaa Gurigaa Caqilkii Wiilka waxbari lahaa, waxaana hortaagnaa dad aad ufara badan oo dhamaantood Caqilka sugaya, s’iay wax uga bartaan.
Laba sacadood kadib ayuuna gaaray wiilkii Iridkii Guriga, caqilkiina wuxuu kuyiri, hada waqti kuuma hayee, daarta soo daawo, kusoo wareeg, laba sacadood kadibna iisoo laabo.
Markuu sii baxayayna wuxuu u dhiibay qaado ay kujiraan 2 dhibcood oo Saliid ah, wuxuuna kuyiri: Gacanta kuxaji intaad soo wareegayso, saliidana hadaadinin.
Wiilkii wuxuu bilaabay inuu fuulo jaranja-rooyinkii daarta, wuxuuna ukala wareegay kor iyo hoos, isagoo aad ufiirinaya qaadada si’ayna saliidu uga daadanin.
Wuxuuna kusoo laabtay Caqilkii, isna wuxuuna weydiiyay: Ma´aragtay rooga Quruxda badan ee yaala qolka cuntada, beerta quruxda badan ee daarta ku hareeraysan, mafiirisay kitabada faraha badan ee yaala qolka buugta?
Wiilkiina wuu naxay, wuxuuna qiray inuusan waxba arkin, maxayeelay wuxuu aad ugu dadaalayay inayna saliidu kadaadanin.
Caqilkiina wuxuu kuyiri noqo markale oosoo baro daarta dabaqyadeeda, dhismaheeda iyo Quruxdeeda.
Wuuna laabtay wiilkii isagoo aad u fiirinayay Quruxda daarta, qalabka lagu sameeyay, lagu sharxay darbiyada, ubaxa aadka uqurxan ee kuyaala beerta.
Markuu usoolaabtay Caqilkiina wuu uga shekeeyay wixii uu soo arkay. Wuxuuna weydiiyay: Aaway salidii aan ku’iri, aad u ilaali, markuu fiiriyay qaadadiina wuxuu arkay inay eber tahay, saliliidiina mar hore daadatay.
Caqilkiina wuxuu yiri: Wataa Nasiixada aan kusiin rabaa: Sirta raaxada naftu waa (Inaad aragto, fiiriso, kuraaxaysato Quruxda Aduunyada adoon daadinin dhibcihii saliidii ahaa).
Markaa ayuuna Wiilkii fahmay raaxada naftu inay tahay: In lays barbar-dhigo, lamiisaamo umuuraha aduunyada iyo danahaaga dhabta ee ku anfacaya Aakhiro iyo aduun labadaba.
Labada dhibcood ee Saliida ahi waa, Caafimaadka iyo Qanaacada/ inaada dadka ubaahanin. Labadaa Qofkii isku darsadana waxay talaal iyo daawo uga noqonayaan cudurada; murugada, walwalka, fikirka badan, hamiga iyo wareerka ama Madax xanuunka.
Cuduradaasina waxay dadka kuqasbaan inay raadiyaan wax kabadan baahidooda dhabta ah ee hada taagan, iyagoo sii xisaabinaya baahida imaan doonta (intaa intaaa kusiidar, sii badi iwm). Hadaba saqaf mau samayn karaa damaceena, hawadeena siaan raaxo –Keydmedia– ugu noolaano, danteean dhabta ah uga fikiro.
Qisadani waxay qeexaysaa Xadiis uu nabaray Rasuulkeenii nabad galyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee isagoo yiri: (Qofkii waa barista isagoo reerkiisu nabad iyo caafimaad qabo, haystana wuxuu maalintaa cuni lahaa, inuu yahay qof aduunyadii loo dhamays tiray xattaa cidiyaheedii).
Hadaba waxaan aad ugu baahanahay inaan soo celcelino damceena, hawadeena, kana fikiro daneheena hada taagan, waxbadana Rabbi (swt) Umahad celino, siaan ugu raaxaysano aduunyada, ugana faa´iidaysano khayrka faraha badan een haysano.
Taasina waxay nagaarsiin lahayd raali ahaanshaha Rabbi iyo inuu noo laba jibaaro khayrka uu nasiiyay ee tirade badan.
Qaraxii Tiyaatarka ka dhacay oo kala geeyay Madaxda DKMG ah (Warbixin). Dr. Cali Khaliif Galeydh oo ka deyriyay dastuurka iyo qaabka wada hadalka Somaliland iyo xukuumadda kmg ah